बलिवूडकी चर्चितअभिनेत्री श्रीदेवीको हृदयाघात बाट निधन – जनस्वास्थ्य खबर
बलिवूडकी चर्चितअभिनेत्री श्रीदेवीको हृदयाघात बाट निधन
१३ फाल्गुन। बलिवूडकी चर्चित अभिनेत्री श्रीदेवीको निधन भएको छ।
५४ वर्षीया श्रीदेवी दुबाईमा एउटा वैवाहिक कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला हृदयाघात भएको ठानिएको छ।
उनको निधनप्रति चलचित्रकर्मी र शुभचिन्तकले शोक व्यक्त गरेका छन्।
श्रीदेवीले मिस्टर इण्डिया, चाँदनी, चालबाज र सदमा जस्ता व्यावसायिक रूपमा निकै सफलसहितका डेढ सयभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेकी थिइन्।
पुरूष कलाकारको सहयोग विनै सफल चलचित्र दिने थोरै अभिनेत्रीहरूमा श्रीदेवीको नाम आउँछ।
उनको जन्म सन् १९६३ को अगष्ट १३ मा भारतको तमिलनाडुमा भएको थियो।
बालकलाकारको रूपमा उनले चार वर्षको उमेरमा एउटा तमिल चलचित्रबाट काम शुरू गरेकी थिइन्।
बालकलाकारकै रूपमा उनले तेलुगु र मलयालम चलचित्रहरूमा पनि अभिनय गरेकी थिइन्।
दक्षिण भारतीय चलचित्रहरूमा काम गरेपछि श्रीदेवीले सन् १९७९ मा मुख्य कलाकारका रूपमा बलिवूड चलचित्र ‘सोलहवा साल’ बाट अभिनय शुरू गरिन्।
सन् १९८० को दशकलाई अभिनेत्रीहरूको दृष्टिकोणले बलिवूडलाई श्रीदेवीको दशकको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्थ्यो।
उनलाई ‘लेडी अमिताभ बच्चन’ पनि भन्ने गरिन्थ्यो।
सन् १९९७ मा जुदाई नामक चलचित्रमा अभिनय गरेपछि १५ वर्षसम्म उनी चलचित्रमा देखिनन्।
सन् २०१२ मा उनले इंग्लिश-विंग्लिश नामक चलचित्रमा अभिनय गरिन्। जुन व्यावसायिक रूपमा निकै सफल रह्यो।
सन् २०१७ मा मम नामक उनको चलचित्र आएको थियो।
हृदयाघात के हो र कसरी बँच्ने ?
डा. मनोज गैरे –
एक्कासी मुटु र देब्रे हात सहनै नसक्ने गरी दुख्ने
श्वास फेर्न गाह्रो हुने, पसिना आउने र डर लाग्ने ।
समयमै हृदयाघातका जोखिमहरूको पहिचान गरी जीवनशैली परिवर्तन गरेमा हृदयाघातबाट बच्न सकिन्छ ।
अस्वस्थ खाना ।
आपतकालीन अवस्थाका लागि Aspirin tablet/Clopidogrel घरमा राख्ने, हृदयाघातको लक्षण देखा पर्नासाथ सो त्बदभित खाने र उपचारका लागि अस्पताल तुरुन्त जानुपर्छ ।
मुटुमा रहेको धमनीमा बोसो जमेर धमनीलाई बन्द गरिदिन्छ त्यसपछि मुटुको मासंपेशीले अक्सिजन नपाई मृत्यु हुन्छ । यसलाई नै हृदयाघात भनिन्छ ।
मुटु रोग छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन प्रत्येक ६ महिनामा निम्न जाँच गर्नुपर्छ :
ईसीजी, रक्तचापको जाँच
मुटुलाई रक्षा गर्ने खानेकुराहरू
थुप्रै प्रकारका गेडागुडी
स्याउ, कालो अंगुर, अनार, मेवा, सुन्तला र अन्य फल
उच्च रक्तचाप र मधुमेहलाई नियन्त्रणमा राख्ने
तनावमुक्त जीवन जिउने
मोटोपन घटाउन ब्यायाम तथा योगा नियमित गर्ने । कम्तीमा पनि ३० मिनेट (बिहान र साँझ)
चुरोट, रक्सी र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन नगर्ने
नियमित रूपमा शरीरको लिपिड ९ँबत० परीक्षण गराउने
नियमित रूपमा चिकित्सकको सल्लाह लिने ।
सीमित (चिनी, मिठाइ, सेकेको वस्तु, चिल्लो, चिप्स)
साप्ताहिक (बोसोरहित मासु, अण्डा)
दैनिक ठिक्क मात्रामा (सिमी, केराउ, भटमासको वस्तु, माछा, ओखर, तोरीको तेल, नरिवलको तेल, जैतुन तेल, दुग्ध पदार्थ र कालो चिया)
पटक–पटक दैनिक( अन्न, गहुँको रोटी, जौ, मकै, केरा, स्याउ, अनार, खरबुजा, कालो अंगुर, बन्दा, सागपात, गाँजर, मसरुम, फर्सी, गेडागुडी, लौका, ग्रिन ब्रोकाउली, प्याज, लसुन र टमाटर ।
एक्लै हुँदा हार्टअट्याकबाट बच्ने तरिका
एक्लै भएका बेला हार्टअट्याकबाट बच्ने उपाय जानिराख्नुपर्छ । हार्टअट्याकका कारण धेरैले ज्यान गुमाउनुपरिरहेको छ । हार्टअट्याकले धनी वा गरिब भन्दैन । यो रोगले उमेर पनि भन्दैन ।
सानो तथा ठूलो जोसुकैलाई आक्रमण गर्न सक्छ । हार्टअट्याक यो समय र यति बजे आउँदै छु भनेर भनिहाल्ने बेथा पनि होइन । तर हार्टअट्याक हुनासाथै के गर्ने भन्ने उपायका बारेमा जानकारी भएको खण्डमा यो बेथालाई सजिलै जित्न सकिन्छ ।
हार्टअट्याकले आक्रमण गर्‍यो भने मानिसहरूले यसबाट बच्न अनेक संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि तपाईंलाई आफ्नो मुटुको चालमा अचानक अनावश्यक परिवर्तन अर्थात गलत संकेतको अनुभव भयो र आफू फेन्ट हुन्छु जस्तो लाग्यो भने यस बखत तपाईंसँग ह्रास गुमाउनुपूर्व जम्मा दस सेकेन्ड समय रहन्छ ।
तर धेरै मानिसलाई आफैंले आफ्नो उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुन सक्छ । यसका लागि आफू आत्तिनु र हडबडाउनु हुँदैन । साथै आफू बेहोस हुनबाट पनि जोगिनुपर्छ । र, त्यसका लागि सकेसम्म खोकी राख्नुपर्छ ।
खोक्नुभन्दा पहिले ठूलो सास लिनुपर्छ । गहिरो र लामो समयसम्म खोक्नुपर्छ । यसरी खोक्नुहोस् ताकि तपाईं आफ्नो फोक्सोमा जमेको थुक, खकार तथा अन्य केही कुरालाई बाहिर फाल्न चाहँदै हुनुहुन्छ ।
प्रत्येक २ सेकेन्डमा नबिराईकन श्वास लिनुपर्छ र खोक्नुपर्छ । यो प्रक्रिया डाक्टर नआएसम्म वा मुटुको धड्कन नर्मल नभएसम्म जारी राख्नुपर्छ । खोक्ने कार्यले एक प्रकारको दबाब पैदा गर्छ ।
यसले तपाईंको मुटु र रगत सञ्चारको गतिमा नियमितता ल्याउँछ । यस प्रकारको प्रेसर अर्थात् दबाबले तपाईंको मुटुको धड्कनको गतिलाई ब्यालेन्समा ल्याउन मद्दत पुर्‍याउँछ । डाक्टर नआइपुगेन्जेलसम्मका लागि यो एकदम भरपर्दो उपाय हो जसले थप नोक्सानी हुन दिंदैन ।